Desh – sudursanchar2
जेठाजु – बुहारी का’ण्डको पर्दाफाँस ! त्यो दिन यस्तो सम्म गरेका रहेछ्न,गोप्य भिडियो सहित…
March 15, 2021 March 15, 2021 AdminLeaveaComment on जेठाजु – बुहारी का’ण्डको पर्दाफाँस ! त्यो दिन यस्तो सम्म गरेका रहेछ्न,गोप्य भिडियो सहित…
काठमाडौ । भाई वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवईमा थिए । घरमा वुहारी एक्लै थिइन् । यहि मौकामा जेठाजु नाता पर्ने छिमेकी दाईले बुहारीलाई लेखेको म्यासेज सार्वजनिक भएपछि सबैको होस उडेको छ । उनले बुहारीलाई सम्बन्धको प्रस्ताव राखेको म्यासेज सार्वजनिक भएको छ । लेखिएको म्यासेज सार्वजनिक भएपछि ति दाईले आफुले नलेखेको दावी गरेका छन् । तर उनले […]